Ho an'ny santionany, ny fotoana itarihana dia miankina amin'ny toe-javatra. Ho an'ny famokarana betsaka, ny mitarika fotoana dia 35-40 andro na mihoatra aorian'ny nahazoana ny fandoavana. Nanjary nandaitra ny fotoana nitarihana rehefa (1) nahazo ny fandoavanao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mandeha amin'ny fe-potoana farany ny fotoananay, azafady mba andefaso ny takiana amin'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra dia hiezaka izahay hanome izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Azonao atao ny mandoa ny fandoavam-bola amin'ny kaontinay na fomba fandoavam-bola hafa izay mila hamafisina miaraka aminay:
Matetika 100% mialoha